Shaydaan waa yahay wax hooyadiis dila; Habar shaydaanna way tahay wax la dilo!
Qore: Maxamed S M Xirsi
Ummadda Soomaaliyeed uma cusba hagardaamooyin ay u gaysteen dad ka dhashay.
Marxalado kala duwan waxaa ina soo maray niman Soomaaliyeed oo iyagu fursado iyo duruufo kala duwan u helay inay abaabushaan quwad maaddi ah sida ciidan, hub iyo hanti guud iyo mid gaarba oo ay inaga boobeen.
Nimankaasi waxaan anigu ugu magac dari lahaa “Boqoshaa ama Like” sida Soomaalidu u taqaan, afafka qalaadna loo yaqaan Mushrum, Funghi iwm.
Boqoshaagu waa geed khudradeed dhulka uga soo baxa si dhaqso badan isagoon la beerin. Waxaa laga cunaa dalal badan ee dunida hase yeeshee Soomaalidu ma cunto walow uu ka baxo dalkeeda.
Geedkaas oo qaab ahaan isu wada eg ayaa qaarkiis yahay sun qofka ku khatalma oo cunaa uu la kulmayo dhimasho degdeg ah. Waa meesha laga yiraahdo nicmo waliba nuqsaanteed leh.
Qoysaskii ay u dhasheen nimankaasi laga yaabee in ay u wada damaashaadeen sidii caadada u ahayd Soomaalida marka uu wiil u dhasho, hase yeeshee ma aysan ogeyn in ay dhaleen oo bulshada ku soo darsadeen “wiil baas” (Boqoshaa sun ah ama geed qadhaadh). Waxaa jira geedo ay Soomaalidu u taqaan “geed xaraar (qadhaadh)” oo aysan dadka iyo xoolaha midkoodna cunin.
Nimanka aynnu ka hadlaynaa waxay kuwoodii hore iyo kuwooda dambeba lahaayeen calaamado ay ka siman yihiin ama ay isaga daydeen kuwaasoo ay ka mid yihiin: xoog wax ku muquunin, kali tashi, sokeeye xasuuqid (waa Soomaalidee), arxan la’aan, hanti boob burcadnimo ah, Diinta Alle caasiyid iwm iyagoo intaas oo afcaal shaydaannimo ah u adeegsanayey maan-gaabyada bulshada. Fadlan hoos ka akhri magacyada kuwii nimankaasi ugu sharka badnaa oo soo mara taariikhda Soomaalida kuwaasoo aan u turin bulshada Soomaaliyeed xitaa xilliyada ay inagu habsadaan musiibooyinka dabiiciga ah sida abaaraha, cudurrada faafa, colaado ay iyagu huriyeen iwm. Soomaalidu waxay ku maah-maahdaa dabkii munaafaq shido muslin baa ku gubta.
Bal haddana aynnu jalleecno/eegno magacyadii ay la baxeen nimankaasi baas. Waxaa ka mid ahaa: Sayyid, Sarreeye, Jabhaha, Mujaahid iwm: magacyadan oo dhammi waxay tilmaamayaan kali talisnimo, cabsi galin iyo amar-ku taaglayn. Magaca guud oo ay isugu iman karaan waa Dagaal-Ooge oo ah shakhsiga magaca u sida kooxda hadba wax cadaadinaysa.
Sidaan kor ku soo xusay, Dagaal-Ooge ama Boqoshaa wuxuu adeegsadaa maan-gaabyada bulshada.
Wuxuu markaa isagu ka dhigan yahay boqoradda shinnida halka adeegayaashiisu ay ka dhigan yihiin raxanta shinnida oo samaysa malabka isla markaana ah ilaalada boqoradda. Haddii aan si kale u cabbiro, Boqoshaagu waa abbaanduule wuxuuna adeegsadaa ciidan la mid ah askarta shinnida kuwaasoo wax kasta u qaniina daacadna u ah isaga.
Waynnu wada garan karnaa in uusan nin kali ahi baabi’in karin Qowmiyad (Nation) dhan hase yeeshee waxa dhibaatada ina gaarsiinayaa waa kuwa ugu caqliga liita wiilasheenna oo uu adeegsado abbaanduulahaas jinni. Sida badan, ninkaasi wuxuu reebaa magac xun oo laga naxo marka la maqlo; sidoo kale, shinnidiisu waxay iyana yeeshaan magacyo aan la jeclayn sidaasoo kale.
Inta aynnu ka xasuusanno raq ku raaxaystayaashii (dhiigyacabyadii) soo maray taariikhda Somalia waxaa ka mid ahaa:
1 - Sayid Maxamed Cabdille Xasan. Ninkaas waxaa la siiyaa labo darajo hase yeeshee waxaa ka mayray darajooyinkaas inuu ahaa dilaa daran. Labada darajo waxay ahaayeen:
o b) isagoo nebcaa si xunna ula dagaallamay gaaladi Soomaaliya u timid gumeysiga;
o t) inuu ahaa gabayaaga ugu weyn Soomaalida inta la xasuusto. Adeegayaashii ama shinnidii Sayidka waxaa lagu xasuustaa magaca “Daraawiish” oo iyagu dadka si naxariis darro ah ugu layn jirey warmo, seefo iwm oo ugu badnaa qalabkii ay adeegsan jireen waqtigoodii.
2 – Janan Maxamed Siyaad Barre wuxuu ahaa dilaa weyn. Wuxuu xukunkii Soomaaliya boobay waqti uu soo ifbaxay hubka wax gumaada. Ninkaasi wuxuu isna adeegsan jirey ciidammo jinni oo leh magacyo baas sida: Guulwadayaal, NSS, Hangash, Dhabar-Jabin iwm kuwaasoo dhammaan ahaa “shinni dadka u cadaadisa.
3 – Janan Maxamed Farax Caydiid. Ninkaasi wuxuu isna ahaa “belo” loo soo diray Soomaaliya iyo dilaagii ugu weynaa uguna axmaqsanaa (doqonsanaa) oo soo mara taariikhda Soomaaliya. Ninkaasi wuxuu adeegsadey waxa lagu magacaabo “Mooryaan” magacaasoo haddii loo rogo af Soomaali kale la micne ah “cayr” ama waxba laaweyaal ama mucsur (fadlan yaan erayga loo qaadan qoyska Soomaaliyeed oo loo yaqaan magacaas kaasoo ka bilowda xaraf wayn). Shinnida mooryaanta Caydiid waxay uga duwan yihiin kuwii ay adeegsadeen labada nine e hore waa iyagoon dhaafin wixii dhulka ka korreeyey iyo wixii dhulka ka hooseeyey labadaba; magacyo kale oo loo yaqaan waxaa ka mid ah: “diirato, fiiqato, qodato, dheddig waa dheddig iwm”. Dad kale waxay mooryaanta ku mataleen “aliens: people from other planets or extraterrestrials” oo afafka qalaad qaarkood la micne ah dad ka yimid meel ka baxsan koonka/dhulka uu aadanuhu ku noolyahay. Mooryaantu waa kuwa ay Soomaaliya ka degi la’dahay 15 sano.
Nasiib darrada hadda taagani waxay tahay, iyadoo ay “mooryaantii” is abaabushey isuna beddeshey wax lagu magacaabay “dawlad”, mana filayo in ay cidina i waydiin doonto yaa u madax ah mooryaanta Soomaaliya maanta taasoo aynnu wada ognahay in ay yihiin kuwa hor boodaya kooxda ay Xabashidu ku caleemo saartay xerada Mbagathy ama “doofaarrey” ee Nairobi, Kenya.
4 – Kornayl Cabdullahi Yusuf Axmed. Asagu waa ayax teg eelna reeb waana haraadigii kuwii doonayey in ay xukunka dictatooriyada Somaaliya ka dhaxlaan Maxamed Siyaad Barre. Sida ay cid waliba ogtahay, wuxuu kornaylku u xusul duubayey 30meeye sano inuu maalin uun fariisto kursiga ugu sarreeya qaran Soomaaliyeed asagoon kala jeclayn inuu ku fariisto qaab xaaraan ah iyo qaab xalaal ah, iyo inuu ka haro magac fiican iyo magac xun midna.
Kornaylku wuxuu isagu uga duwanaa 3dii nine e ka horreysey isagoo ujeeddadiisaas xukun doonka ah u adeegsadey kuwa ugu xun cadow ay Soomaaliyi leedahay oo ah “xabashida”. Shinnidii uu ninkani adeegsan jirey waxaa ka mid ahaa: dableydii SSDF oo loo yiqiin dhafoor-qiiq, jirri, calooshood u shaqaysteyaal iyo xabashi.
Inkastoo uu dagal ooguhu ama boqoshaagu cadaadis badan ku hayo dableyda u adeegta, haddana wuxuu ku hayaa laaluush joogto ah si ay u kordhiyaan daacadnimad ay u hayaan.
Shaqada adeegayaashooda (shinnida) dagaal oogayaashu maaha oo kaliya laynta iyo boobka dadweynaha marka uu ku fasaxo “abaanduulahoodu” maadaama uusan u hayn mushahaar; ee waxay tahay in ay u sacabiyaan oo indho la’aan ku ayidaan (full suppor) damacooda waalan ee siyaaso ku sheeg ama hankooda xukun doonka taasoo ah calaamad kale oo ay ka siman yihiin dagaal oogeyaashu kuwo hore iyo kuwa dambeba. Boqoshaa ama dagaal ooge kasta waxay adeegayaashiisu ugu yeeraan erayga “Aabbe”: Sayid Maxamed Cabdille Xasan waxay ugu yeeri jireen “Aabbe Sayidii”; Maxamed Siyaad waxay oran jireen “Aabbe Siyaad”; Caydiid waxay oran jireen “Aabbe xoreeye”; Kornayl Cabdullahi Yuusufna waxay yiraahdaan “Aabbe geesi”. Marmar dhif ah ayay dhacdaa in ay Boqoshaaga shinnidiisu ku gadoodaan oo ka amar diidaan, afgambiyaan amaba meleggiisa joogaan. Ilaa hadda waynu ognahay in ay Caydiid dileen kuwii uu tababaray; regiimkii Maxamed Siyaad ay afgambiyeen kuwii uu tababaray, haddana ay faro ba’an ku hayaan Cabullaahi Yuusuf haraadigii labadii janan (Siyaad & Caydiid) iyo isaga shinnidiisii oo wada jira.
Tusaalaha arritaan dambe meel fog kama doonaynno ee waxaa inaku filan waxa ka socda Nairobi, Kenya:
Shir ku sheeggii ay Soomaalidu ku xoonsanayd 2da sano dalka Kenya waxaa isugu tegey dad 3 nooc ah:
o b) nooca 1aad waa dhammaan dagaal-oogayaashii Soomaaliya oo tiradoodu 50 kor u dhaaftay;
o t) adeegayaashoodaii (shinnidoodii) iyo
o j) dad tiro yar oo isugu jira aqoonyahan rag iyo dumarba iyo odayaal kuwaasoo aan wax cod ahba ku lahayn shirkaas hase yeeshee meesha u tegey “ha la rooraan run moodey”.
Maxaa meeshaas ka dhacay?
Mar mar ayay Boqoshaaga u socon waydaa “shimbirayohow heesa sida aan kor ku soo sheegay oo ay shinnidiisu ku soo jeesataa waase marka ay u helaan geesinnimo.
Kooxda Nayrobi fadhida ayaa hadda u eg in ay heleen wxoogaa geesinnimo ah ka dib markii ay dhowaan ka horyimaadeen kornayl Cabdullaahi Yuusuf ayagoo si sahlan u kala tuuray wixii ay xabashidu u dhoo-dhoobtay oo loogu magac daray xukuumadda. Ayaamo ka sii horna waaba iyagii ka diidey in uu cid aan baarlamaan kusheegga ka tirsanayn uusan u magacaabi karin xil golaha xukuumad ku sheegga.
Waxaa markaas is waydiin leh, xaggee ayay haddaba ka keeneen geesinnimadaas shinnidii Boqoshaagu?
Aniga jawaabtu waa ii sahal oo waxay ka keeneen joogitaanka dalka dibeddiisa. Haddii ay joogi lahaayeen gudaha Soomaaliya waxaa hubaal ah in aysan taasi sahal u dhacdeen.
Sababtu waa “fuleynimada” Soomaalida sidii uu hore ugu tilmaamaya Sayid Maxamed Cabdille Xasan markii uu tiriyey gabaygiisii “Ta’leyda” oo an ka soo qaatay dhowrkan beyd:
o Soomaali anigaa tamminay Tiilka ay tahaye
o Anigaa tafnidey meeshan iyo Toban jirkaygiiye
o Anuu iga tus qaataa ninkaan Teeda garanayne
o Waa wada tukiyo fule hadday Rag isu tookhaane,
o Tumaalliyo talaamiid ka siman Tororog Beenaade
o Taraawiixda Sonkaa waxay Tuman Ciyaaraahe
Halkaas waxaa inooga soo baxay in midka lagu gadooday uu yahay Boqoshaa sun ah (Dagaal-Oooge) kuwa ku kacayna ay yihiin Shinnidii uu adeegsanayey xaaladdaasoo aynnu ku soo gabagabayn karno oraahda ah:
“Shaydaan waa yahay wax Hooyadiis dila; Habar shaydaanna way tahay wax la dilo”